यसरी गर्नुहाेस कागतीकाे व्यवसायिक खेती - कृषि डेली
Home banner यसरी गर्नुहाेस कागतीकाे व्यवसायिक खेती
यसरी गर्नुहाेस कागतीकाे व्यवसायिक खेती
काठमाडौं। पछिल्लो समय नेपालमा पनि कागतिको व्यवसायिक उत्पादन शुरु भएको छ । भिटामिन सी प्रशस्त मात्रामा पाइने र स्वास्थ्यका अन्य दृष्टिबाट पनि लाभदायक मानिने भएकाले यसको प्रयोगमा पनि वृद्धि हुँदै गएको छ ।
कागती खेतीको लागि कस्तो हावापानी चाहिन्छ?
Previous articleअसार २१ गतेकाे तरकारी तथा फलफूलकाे मूल्य हेर्नुहाेस
Next articleसरकार ! बन्द गर ‘कृषिबाट समृद्धी’ को नारा